Muxuu salka ku haya go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku mamnuucday diyaaradaha tooska u tagi jiray magaalada Kismaayo? - BaravaNewsBaravaNews
You are here: Home / Wararka / Muxuu salka ku haya go’aanka ay dowladda Soomaaliya ku mamnuucday diyaaradaha tooska u tagi jiray magaalada Kismaayo?
Hay’adda duulista hawada ee Soomaaliya ayaa shirkadaha diyaaradaha ku wargelisay in dhammaan duullimaadyada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ee ku sii jeedaa magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku-meelgaarka ah ee dowlad-gobolleedka Jubbaland ay soo maraan Muqdisho,sida uu Hiiraan Online u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan hay’adda duulista hawada Soomaaliya.
Lama oga sababta ay dowladda federaalka Soomaaliya u joojisay duullimaadyada caalamiga ah ee toos u taga magaalada Kismaayo,balse waxay imaneysaa iyadoo toddobaad laga joogo markii ay qabsoontay doorashadii Jubaland ee uu muranka ka dhashay, taas oo uu ku guuleystay Axmed Madoobe.
Magaalada Kismayo waxaa taga duuliimaadya badan oo isugu jiro kuwa maxalli ah iyo kuwa caalami ah, waxaana sidoo kale Kismaayo taga duulimaadyo kale oo ah kuwa ciidammada AMISOM, gaar ahaan kuwa Kenya.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in go’aankan uu yahay mid lagu hubinyo dhaq dhaqaaqyada diyaaradaha ka dega Kismaayo oo aan waxba laga ogeyn.
“Tallaabadan ayaa qeyb ka ah howlaha la socodka Hawada Soomaaliya ee ay maamulkeeda gacanta ku heyso dowladda Soomaaliya, gaar ahaan Hay’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada.” ayuu yiri sarkaal la hadlay Hiiraan Online oo inta ku daray in go’aankan la wargeliyay dhammaan shirkadaha diyaaradaha.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad-gobolleedka Jubbaland ayaa xiriirkooda uu xuma, sidoo kale waxaa xiisad diblumaasiyadeed dowladda Soomaaliya ay kala dhaxeysa dalka Kenya oo ciidammada ugu badan ay ka joogaan magaalada Kismaayo.
aden cade airport Somalia
Previous: Xilliga doorashada Jubaland oo lasoo hormariyey
Next: Wabiga Shabeelle oo fatahaad hor leh ka sameeyay magaalada Beledweyne